Kismaayo News » Cumar Xamaami saaxiibkiis iyo nin Soomaali ah oo lagu xirey Maraykanka
Cumar Xamaami saaxiibkiis iyo nin Soomaali ah oo lagu xirey Maraykanka
Kn: (Mobile, Alabama) : Labbo nin oo lagu tuhunsanyahay falal argagixisnimo ah ayaa lagu xirey dalka Maraykanka, midkood waxa uu saaxiib la ahaan jirey ninka caanka ah ee Alshabaab madaxdooda ka mid ah Cumar Xamaami ee dalka Maraykanka u dhashay, waxaana lagu magacaabaa Randy Rashiid Wilson, marna hal qol ayay wada seexan jireen Cumar Xamaami.
Maxamed Cabdiraxmaan Cabduqaadir oo nin Soomaali ah ayaa isaga la xirey, isagana waxaa lala xiriirinayaa Alshabaab, waxaa lagu qabtay meel basaska istaagaan, halka Wilson la qabtay isagoo dayuurad sii fuulaya oo u socda dalka Maroco.
Cabdiqaadir ayaa sanaddii 2010 kii ka mid ah dad koox ah oo lagu xirey dalka Masar, kadibna labbo bilood kadib loo tarxiiley Maraykanka.
Labadan nin ayaa qadka isku bartay, kana wada hadlay sidii ay Alshabaab gacan u siin lahaayeen, una geeysan lahaayeen falal argagixisonimo, sida ku cad diiwaanada Markamadda oo maanta ku bilaabanaysa.
Waxaa la ogaaday in labadan nin ay isku balansadeen in ay tagaan magaalada Casabalanka ee dalka Moroco, kadibna oga gudbaan dalka Marutania si ay halkaasi dagaal oga galaan, ama usii gudbaan dal sedexaad oo ay u badantahay in uu Soomaaliya yahay.
Waxa ay mar labadan nin isku qabteen fikir uu Cabdiqaadir soojeediyey oo ahaa in ay afduub ka sameeyaan Maraykanka dhexdiisa, ama meelo qarxiyaan, ama police-ka rasaaseeyaan, balse Wilson ayaa aragtidaasi diidey.
Cabdiqaadir ayaa sidoo kale lagu heystaa in wax isdaba marin kadib markii uu dalbaday baasaboor cusub isagoo been sheegey, maadaamaa kii hore ee uu heystey uu leeyahay tiimbarihii Masar markii uu joogey.
Cumar Xamaami oo ay kala dhaleen aabo muslim ah iyo hooyo masiixi ah, ayaa kuleejka iyo jaamacadaba ka dhigtey South Carolina, halkaasi oo uu noqdey madaxweynaha ururka ardayda Muslimiinta, waxana ay halkaasi sanadii 2002dii ku kulmeen Wilson, oo markii dambe ay hal qol wada seexanayeen 7 bilood.
Qabashada labadan nin ayaa waxa ay ka dambeeysay kadib markii dalka Maraykanka todobaadkan ay bilaabeen dardar cusub oo u muuqata in ay kusoo afjaraayaan dacwooyin muddo soo jiitamayay, iyadoo maanta go’aan laga gaaray labbo dacwadood oo kale.